Malunga nathi -Handan Qifeng Carbon Co., Ltd.
I-Handan Qifeng Carbon Co., Ltd. ngumvelisi omkhulu wekhabhoni eTshayina, onamava angaphezulu kweminyaka eli-15 yokuvelisa, unokubonelela ngezinto zekhabhoni kunye neemveliso kwiindawo ezininzi. Sivelisa ikakhulu iiCarbon Additives (CPC & GPC) kunye negraphite electrode ezine-UHP / HP / RP grade.
Emva kweminyaka emininzi yemizamo, iimveliso zenkampani yeQifeng ziye zaqatshelwa kakhulu ngabathengi basekhaya nabangaphandle kunye nentsebenziswano enzulu. Injongo yethu: kanye intsebenziswano, intsebenziswano ubomi! Okwangoku inkampani yethu ikakhulu inxaxheba calcined petroleum coke screening zonke iintlobo ubungakanani yamasuntswana kunye grafayithi electrode Ububanzi ukusuka kwimveliso 75mm ukuya 1272mm kunye neentengiso, sulphur yethu ephantsi & sulphur eliphakathi calcined petroleum coke ngokusebenzisa screening yethu yobungcali ikakhulu kusetyenziswa aluminium pre-kubhaka izinto anode , Ukulahla kunye nokwenza i-carburant yentsimbi, imveliso ye-titanium dioxide, izinto zebhetri ye-lithium, ikhemikhali, njl.
Umzi-mveliso wethu unesixhobo sokuqala semveliso yekhabhoni, itekhnoloji ethembekileyo, ulawulo olungqongqo kunye nenkqubo yokuhlola egqibeleleyo, imveliso yethu yokuvavanywa kwelabhoratri esemgangathweni inokuqinisekisa ukuba yonke into ethunyelwayo iyangqinelana neemfuno zabathengi, sineqela elikhulu lolungiselelo, qinisekisa Ukhuseleko lwempahla nganye ethunyelwe ngexesha lifikile kwizibuko. I-Qifeng iyahambelana nezikhokelo zokuqinisekisa umgangatho kunye nobungakanani kunye nenkonzo ebalaseleyo. Umthamo wokuthumela ngaphandle inyanga nenyanga ngaphezulu kwe-10,000 yeemveliso zeetoni, kwaye sikude kakhulu kumashishini abucala asekhaya.
Sinethemba lokuba sisebenzisana nabahlobo kwihlabathi liphela ukwakha iQifeng kwiqela leshishini elinobungqingili obuninzi, nobuganga bokucela umngeni, ukuqhubeka okutsha kunye nophuhliso olomeleleyo.